कान्ति बाल अस्पतालको कन्त-बिजोग ! « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । बालबालिकाको उपचार गर्ने एक मात्र ठूलो सरकारी अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालको अवस्था विजोग छ । अस्पतालमा उपचारका लागि गएका बिरामी र तिनका आफन्तका लागि छुट्याइएको शौचालयको अवस्था नाजुक छ ।
हाम्रा दर्शकहरुले अस्पतालमा रहेका शौचालयको अवस्था बारे जानकारी गराएपछि हाम्रो टिम कान्ति बाल अस्पताल पुग्यो । कान्ति बाल अस्पतालको शौचालयको अवस्था सँधै यस्तै भएको यहाँका चमेना गृहमा काम गर्ने एक ब्यक्ति बताउछन् । कतिसम्म भने आफूहरुलाई शौचालय जानु परे शिक्षण अस्पतालको शौचालय जाने गरेको उनी बताउँछन् ।
अस्पतालका कर्मचारीहरुले यो शौचालय प्रयोग गर्दैनन् । उनीहरुका लागि छुट्टै शौचालय छ । अस्पतालका कर्मचारीहरु आफूले मात्र प्रयोग गर्ने शौचालय सफा गराउँदा रहेछन् ।
तर, अस्पताल आउने विरामी र आफन्तले प्रयोग गर्ने शौचालयको भने विजोग छ । बिरामीका आफन्त त बाहिर रेष्टुरेन्ट तिरका शौचालय पनि प्रयोग गर्छन्, तर, विरामीले के गर्ने ? अस्पतालको अवस्था सँधै यस्तै रहेको त्यही कार्यरत नर्स बताउँछन् । अस्पताल प्रशासनलाई पटक–पटक यसबारे जानकारी गराएपनि मर्मत सम्भार नगरेको उनको गुनासो छ ।
यी नर्सले अस्पतालमा खाने पानी पनि नभएको गुनासो गरेपछि हामी खाने पानी ट्याङ्की हेर्न गयौं । खाने पानी ट्याङ्कीमा फोहर, किरा मात्र देखिन्छ । अस्पतालमा मर्मत सम्भार गर्न शाखा पनि छ, भन्ने थाहा पाएपछि हामी उक्त शाखामा पुग्यौं । यहाँ शनिबार भएकाले एक जना मात्र कर्मचारी रहेछन् । तर ती पनि मदिरा पिएर मस्त निदाइरहेका थिए ।
उमी मदिरा पिएर सुतेको थाहा पाएपछि हामीले मेडिकल गर्नु पर्ने भन्यौं तर, उनी आफैले रक्सी पिएको स्विकारे । उनले पनि आफ्नो गल्ती देख्दैनन् । अस्पतालको अवस्था बारे आफूले पटक–पटक प्रशासनलाई जानकारी गराएपनि प्रशासनले चासो नदेखाएको बताउछन् ।